Izindaba - Mayelana neBaolai
IZhejiang Baolai Group Co., Ltd.yibhizinisi elikhulu elizimele elihlanganisa ukukhiqizwa kwezingilazi, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa, nokungenisa nokuthekelisa izimpahla. Inkampani yethu inezimboni ezintathu ezindaweni eziphezulu zomndeni, izitolo ezi-2 maphakathi nedolobha lezokuhweba, inkampani yezohwebo yakwamanye amazwe, nezinkundla ezinkulu zokuthengisa ezivela eceleni komfula. Ngeminyaka engu-19 yokuhlangenwe nakho ekukhiqizeni izingilazi, sihlanganise izimboni zezingilazi ezicishe zibe yikhulu kanye nezimboni zezinto zokubambisana. Ifektri itholakala eLinhai, eTaizhou, eZhejiang, okuyisisekelo sokukhiqiza esikhulu kunazo zonke ezweni. Lesi sitolo kanye nenkampani yezohwebo yakwamanye amazwe itholakala esikhungweni esikhulu kunazo zonke emhlabeni sokusabalalisa izimpahla - i-Yiwu, eChina. Amaklayenti amakhulu amazwe ngamazwe inkampani yethu ebambisana nawo afaka phakathi: i-Coca-Cola, i-Unilever, i-Wal-Mart, i-Disney, i-Lipton, i-Ford, njll. Le nkampani ithatha ubuchwepheshe obusha njengomhlahlandlela, ubuchwepheshe njengenqubomgomo, kanye namathuluzi ahlukahlukene athandwayo wokuhweba angaphandle njengosizo. Futhi inenzuzo yentengo ngokubambisana namafektri angama-600 asembonini efanayo, kuhlanganiswe nomnyango wethu wokuhlola amadokhumentari, ukuhlinzeka amakhasimende omhlaba wonke ngemikhiqizo esezingeni elifanele, okuholela umkhakha ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme namanani entengo.
Inkampani ihlale ihambisana nomqondo "ogxile kubantu" futhi ihlonipha wonke umuntu ozimele, kufaka phakathi amakhasimende, abasebenzi, abalingani, abahlinzeki kanye namaqembu ezenhlalo. Ngokusekelwe "ekwethembekeni" kanye "nokwethemba" ngenhloso, siphishekela ubuhle, siqhubeka sithuthukisa futhi senza izinto ezintsha, futhi sihlala sisebenza kanzima ngenjabulo yomuntu siqu yabasebenzi benkampani kanye nezintshisekelo zamakhasimende nabahlinzeki.
Ngokuya ngenhloso yokwakha uphawu olukhulu lwenkampani, sinokuqiniseka kokuphumela obala kungakapheli iminyaka emihlanu, siphikelele ekuthuthukisweni okuzinzile nokwesikhathi eside. Ngasikhathi sinye, sithembele emithonjeni yabantu eqinile, ekuphathweni kokukhiqizwa okunzima nefilosofi yebhizinisi, ngokunqwabelana kwesipiliyoni sethu kanye nokuphishekela okungapheli nokwenza ngcono ikusasa, Ozibophezele ekubeni ngumholi embonini ye-optical eChina nasemhlabeni !